Bombardier CRJ-200 Pack (Okwu gbasara CoG / Bouncing)
Jikọtara: 11 Mee 2020, 20:46
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by SimFan 1996 » 11 Mee 2020, 22:18
Enwere m ebudata n'oge na-adịbeghị anya ma na-efe efe mara mma CRJ-200. Achọpụtara m na ndekọ mgbanwe ahụ na-egosi na enwere mgbanwe.cfg nke doziri ịdị arọ nke ụgbọ elu ahụ. Agbanyeghị, m na-ahụ na etiti ụgbọ elu nke ike ndọda na-eburu ihe niile dị na imi ike na agbanyeghị mgbakwunye arọ, ọbụlagodi n'ụgbọelu efu. M na-enwe nsogbu na wiil ụkwụ na-awara awara n'okporo ụzọ awara awara, na-eme ka oke oke nke ịmịkọta yana imi skidding mgbe m na-arịda.
Ekpebiri m igwu na faịlụ wọllopi ahụ, ekwenyekwara m na mgbakwunye .cfg atụkwasịghị nke ọma na nbudata a. Achọpụtara m na ọ bụ ihe nzuzu na ọnọdụ datum na ọnọdụ CG na-agafe ụzọ niile. Enwere m mmetụta na nke a na - enye aka na nkwụnye ụgwọ na mmanụ ọkụ, yana ntanetị mgbe ọ bụla efu ma ọ bụ zuru.
koodu: Họrọ ihe niile
Onye ọ bụla nwere ndụmọdụ, echiche, ibudata iji dozie nsogbu CoG na ụgbọ elu ahụ? Ihe okwu CoG ọ ga - abụkwa ihe kpatara nsogbu dịịrị na tagzi n'ụzọ na n'okporo ụzọ awara awara? Anọghị m n'echiche dịka m na-enweghị ọfụma ọkachamara na enweghị echiche ebe m ga-amalite idozi nsogbu ndị kwuru.
Jikọtara: 11 Eprel 2017, 13:48
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by señordelfeudo » 12 Mee 2020, 12:16
Echere m na nke ahụ ga - eme ka etiti ike ndọda na etiti ụgbọ elu ahụ, mgbe ụgbọelu ahụ enweghị isi. Anaghị m ahụta mgbada n'ihi na airbrakes yiri ka ọ nwere mmetụta mana achọpụtara m ya waaaaaay ka floaty. Dị ka imi ka na - agbago elu 60 na - agbadata agbada. Ọ na-eme ka ihe sie ike ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa, abụghị ezigbo.